DEG DEG: Qarax Ismiidaamin oo ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye | Dhacdo
Home Wararka Maanta DEG DEG: Qarax Ismiidaamin oo ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye
DEG DEG: Qarax Ismiidaamin oo ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye
Wararka laga helaayo wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye ayaa sheegaya in halkaasi goor dhaw uu ka dhacay Qarax Ismiidaamin ah.
Qaraxan ayaa waxaa fuliyay ruux naftiis halige ah kaasi oo la sheegay inuu watay Boorso ay ku jiraan waxyaabaha Qarxa, waxaana uu beegsaday goob ay ku sugnaayeen Injineerada Turkiga ah ee wadada dhisaayo.
Qaraxa waxa uu si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan Sos oo ah goob u dhaxeyso Lafoole & deegaanka Xaawa Cabdi, waxaana la soo warinayaa in halkaasi uu ka soo gaaray Khasaare dhaawacyo ah injineerada Turkiga ah ee wadada dhisaayo.
Dhismaha wadadan oo mareyso heer gaba gabo ah ayaa Al Shabaab waxa ay isku dayaayaan inay carqaladeeyaan, iyaga oo horay ugu soo qaaday weeraro Ismiidaamin ah oo gaadiid loo adeegsaday.
Booliska Haramcad oo ammaanka wadada sugaayo ayaa lagu soo waramayaa in dhankooda waxyeelo ay soo gaartay inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn tirada Askarta waxyeelada ay soo gaartay.
Guud ahaan wadada Muqdisho & Afgooye ayaa markii horeba xirnayd oo gaadiidka aysan mari karin inta dhismaha socdo, marka laga reebo gaadiidka Ciidamada ay saaran yihiin oo loo ogol yahay wadada inay maraan.
Previous articleSaddex nin oo lagu soo bandhigay Degmada Heliwaa (SAWIRRO)
Next articleItoobiya oo shaacisay Magacyada Saraakiil ay ka dishay Tigreega